होशियार ! ख्याल गरौ पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है
अक्टोबर 17, 2019 अक्टोबर 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक2Comments धर्म, पाप
पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है ! नेपालमा शंका उपशंकाको खेती निकै चर्कदो अवस्थामा देखिन थालेको छ । जसले केहि गर्न देखि हिचकिचाउछ सवैभन्दा बढी उहि तर्सन्छ भन्थे साँचो रहेछ । धर्मशास्त्रमा कलियुगमा देवीको पुजा धनको रूपमा गर्नेछन् भनेको छ । पैसा नै माता पिता पैसा नै जन्म र पैसा नै अजर अमर पैसा नभए बरू मरिन सक्छ पैसा भए मृत्युलाई पनि जीत्न सकिन्छ भन्ने भावना निकै प्रवल देखिएको छ ।
जन्मनुको अर्थ भनेको समाज सेवा हो धर्म संस्कृति बचाउनु हो भगवान छन् गलत नगर भनेर प्रचार गर्नु हो । आज नेपालीहरू अरूको धर्मलाई धर्म मान्न तयार छन् तर आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई अफिम भन्दैछन् । जसले म मरेपनि मेरो देश बाचिरहोस् भन्छ त्यसैलाई गलत भन्न पछि नपर्नेहरू यहि भूमिमा छन् । के गलत के सहि सवै पैसाले अन्धो बनाएको छ । जब जब पापको घडा भरिन थाल्छ त्याहा गलत बिचारले डेरा जमाउन थाल्छ यो सवै धर्म संस्कृतिको खिल्ली उडाउने हरूमा देखिन थालेको छ ।
हे भगवान सम्पुर्ण जगत विशेष गरि नेपालीलाई सदबुद्धि देउ । जसले जताबाट माने पनि भगवान एक छौं । भगवानलाई बाइबलको रूपमा मानौं जुनसुकै रूपमा मानौं आखिर भगवान नै हुन । जब भगवानले मानवको जन्म गर्नुहुन्छ त्यतिबेला उसले कुन धर्म संस्कृति मान्ने भनेर जन्म दिएको हुदैन तर मानव सेवा गर भनेर जन्म दिएको हुन्छ ।
राम्रो मान्छे चांडो मर्छ तर गलत मान्छे मर्दा उसले धेरै भगवान सम्झनुपर्छ । उसले धरै जनाको बोझ बोक्नुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा उ मर्न चाहदा पनि उ मर्न सक्दैन न उ राम्रोसंग सुत्न सक्छ । उसले गरेका सवै पापले उसलाई जीउदै मरेको अनुभव दिन थाल्दछ ।
एकपटक एकजना पापीले भगवानलाई सोधेछ म मर्न चाहन्छु तर भगवानले भन्नुभयो हेर तिमीले धेरै अपराध गरेका छौं तिम्रो मृत्यु धेरैलाई विदा गरेपछी मात्र हुनेछ । तिमि त त्यसै मरिसकेका हुनेछौं भनेर भन्नु भएछ । यो सुनेपछि उसले मेरो अपराध कसरी छ मा योग्य हुनेछ प्रभु भनेर सोधेपछि तिमीले गरेका ती सवै अपराध जस जसको गरेका छौं सबैको उद्धार गरेको घण्डमा बल्ल तिम्रो मृतु सजिलोसंग हुनेछ भनेपछि सबैको उद्धार गरेर मरेछ ।
← औषधिद्वारा मोतियाविन्दुको सफल उपचार
सरकारले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स’को आयोजना गर्ने →
नोभेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक 9
2 thoughts on “पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है”